Al-shabab oo la ogaaday in qaraxyada ay u adeegsato hubkii ay ka qabsatay AMISOM | Jubbaland Media Online
Al-shabab oo la ogaaday in qaraxyada ay u adeegsato hubkii ay ka qabsatay AMISOM
Posted on July 2, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Baaritaan dhawaan lagu sameeyey qaraxyada Al Shabaab ay ka geysato gudaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu ogaaday hubka ugu badan oo ay u adeegsadaan weerarada inay yihiin hubkii ay kooxdaasi ka furatay ciidamada AMISOM.
Greg Robin oo kamid ah khabiirada dhanka Qaraxyada oo ka qeyb qaatay mashruuc baaritaan oo ay maalgelisay dowlada Ingiriiska oo lagu baarayey qalabka loo adeegsado qaraxyada ay Al shabaab fuliso ayaa sheegay in xog badan ka heleen aaladaha iyo siyaabaha ay Al Shabaabo u sameyso qaraxyada ay dadka badan ku disho.
“….60% Qaraxyada Al Shabaab koonfurta Soomaaliya iyo gudaha Kenya ka geysato waxaa laga sameeyey hubkii iyo bambaanooyinkii ay ka heleen xeryaha AMISOM….” Ayuu yiri Greg Robin oo wareysi siiyey jariirada Daily Nation ee kasoo baxda dalka Kenya.
Mr.Robin ayaa sheegay in Al Shabaab hub aad u badan ka heleen xeryihiin ciidamada Kenya oo ay weerareen sanadihii lasoo dhaafay, hubkaasina ay hada u adeegsadaan qaraxyada iyo miinooyinka.
Aalada wax qarxisa ee RDX- explosives oo sidoo kale loo yaqaan “cyclonite”, ayaa u badan waxyaabaha qarxa oo ay Al shabaab hada adeegsato, waxaana laga sameeyey hubkii ay ka qabsadeen ciidamada AMISOM. Aaladan ayaa waxaa lagu sameeyaa dalka Britain waxayna ka xoog badan tahay aalada wax qarxisa ee TNT, sida uu sheegay khabiirkan.
Ragga AL Shabaab u sameeya bambaanooyinka ayaa aaladan wax qarxisa kusii dara (aluminium powder) si ay sare ugu siiqaadaan waxyeelada ay bambaanooyinkooda geystaan.
Al Shabaab ayaa qarxiyayaasha u adeegsada Telefoonada gacanta iyo Car alarm, oo ay kusii xiraan batteriga bootooyinka ee 12V battery, fiilooyinka isku xira ayey inta badan ka keensadaan Yemen, ayuu yiri khabiiran ka qeyb qaatay baaritaano ka dhacay gudaha Soomaaliya ee lagu eegayey bambaanooyinkii loo adeegsaday weeraradii Al Shabaab.
Xog aruurintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in AL Shabaab ay sanadkii hore 2016 laba jibaartay weerarada qaraxyada noocaan ah u adeegsadaan kadib markii ay hub badan ka furatay Amisom.
Wuxuu sidoo kale khabiirkan sheegay inaysan helin ama aysan jirin wax cadeyn ah oo muujineysa in Al Shabaab wax taageero ah ka hesho dalalka muslimiinta.
Waayadii hore Al Shabaab qaraxyada waxay u adeegsan jireen hubkii hore ee Soomaaliya balse miinooyinka iyo qaraxyada waayadan danbe waxay u adeegsadaan aaladahan iyo hubka culus oo ay ka heleen xeryaha ciidamada Amisom.
Cadadka hubka galay gacanta Al Shabaab ayuu khabiirkan sheegay in ay muddo dheer kusii dagaalami karaan.